Latsa-pitiavana amin'ny vehivavy manambady dia tsy misy dikany - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Rehefa avy ny farany fisarahana, ny zavatra rehetra tsy netyKoa izany no tena ratsy. Fa ankehitriny ianao dia faly fa ianao no tsy amin'ny mpiara-miasa teo aloha, faly ianao satria ianao na ho ela intsony. Izy irery ihany no tsy nisara-panambadiana na izany aza, tsia, izy tsy dia nisaraka. Efa nanao izany ianao, fa ianao mahalala fa amin izany trano izany ny vadiko, dia miandry ny fifamihinana sy ny namihina azy ny zanany lahy rehefa tonga izy ireo. Maro ny olona ao amin'ny fifandraisana (na lahy, na vavy) dia tsy manaiky ny hisaraka vady sy ny taloha ny fiainana ao ambadika. Farany, ny fiainana amin'izao fotoana izao ny toe-draharaha dia manana tombontsoa maro. Ny vadiny mikarakara ny raharaha ara-bola, tokony manahy raha toa ka na dia mitondra ny fiara ary venereal ny aretina ny asa, misaotra anao, tena lehibe. Izany no antony mahatonga ny zava-nitranga dia matetika nahemotra ny volana na taona miaraka foana ny fampanantenany izy. Tsy dia miresaka izany satria mety hitranga ny amin'ny hoavy. Ary raha izany, dia inona no nataony fa hilaza aminao? Ireo fanambarana dia marina foana ny fampanantenany izy. Izany no mba hiaro anao mafana. Dia fantatra fa tsy mitondra ny fihetseham-po ho azy sy hanao na inona na inona tianao mba afaka manohy ny mahita. Ary izany indrindra no zava-bitan'ny. Indrindra fa ny andian-teny hoe"Raha ny vadiko no manao zavatra ratsy, omeo ahy ny vitsivitsy kokoa volana"an'ny manam-pahaizana ny"Jersey, ravoravo". Mazava ho azy, ka tsy tiako ny vadiko, izay efa lainga sy hosoka nandritra ny volana maro, mba ho ratsy, fa marary-vonona dia tsy olana ho anao, na raha toa izy ka"tia anao". Ka inona no azontsika ianarana avy teo aloha hevitra? Marina ny zavatra azontsika ianarana avy amin'ny andininy teo aloha. Marina ny zavatra nanoloana ny masony, izay tsy mampiasa. Manamafy ny mazava tsara sy mazava fa tsy misy intsony, foana, fa te-ho zavatra mafy noho ny anao te mba ho, ary ny alalan ny"Fahatsapana Mazava". Tsy tanteraka ny trosa aminao ny hevitra ny fahalalahana izay ilainao mila kokoa ny faharetana, ny kokoa ny fotoana mba hanapa-kevitra ho an'ny tenanao. Rehefa afaka izany, dia manana na inona na inona intsony ho an'ny tenanao. Tsy misy hafatra, misy antso an-tariby.
Tsy maintsy mahalala fa ianao no tsy eo ny baolina na ny saribakoly, hanalam-baraka, foana ny eo an-toerana raha toa amin'io fotoana io indrindra.
Tsarovy: raha toa ianao ka foana ny mijoro, dia mihazakazaka toy ny kely alika nandohalika teo ny indray. Ny lehilahy, ny vehivavy, mazava ho azy, rehefa mihazakazaka azy ireo ho an'ny vehivavy, fa ny tena tsara tarehy.
Noho izany dia tsy hanadino ny mahazo eo amin'ny olona ny vokany ary hiandry sy hijery raha sy rehefa tatitra mifanaraka amin'izany.
Ihany rehefa tsy misy intsony manana efitrano mba hijoro, mihevitra momba ny toe-draharaha ny fanaintainany sy ny mety ho vahaolana. Ny olona izay mamitaka antsika rehefa miezaka ny hanao izany indray ny manaraka ny fifandraisana. Ny intsony ny fifandraisana maharitra, ny kokoa ny vadiny handrava ary na dia lainga. Avy eo dia alaivo sary an-tsaina manontany tena raha toa ka ianao ve manana fifandraisana amin'ny vehivavy toy izany. Amin'ny farany, dia afaka ny hanana toy izany koa miroborobo lahatra sy tsy azo soloina rehefa fohy iray ny fe-potoana miaraka, na dia eo aza ny vaovao fanoloana ny olona. Efa nanambara ny fandraràna ny fifandraisana, izany dia tena ny andian-manova zavatra ho an'ny toe-draharaha sy ny fiovana izany. Iza no mahalala, angamba dia tena raiki-pitia aminao sy ao anatin'ny herinandro dia manambara fa ny vadiny efa nolazaiko anareo ary izy ireo dia efa mitady ny trano vaovao. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe tsy hiverina ny taloha ho an'ny rafitra.
Hoe: ary izy no mangataka anao mba hihaona, tsy hiditra any an-famindram-po, ny anareo mifarana amin'ny fandriana, ary ianao indray avelao ihany foana ny fampanantenana fandraisana ho mpikambana.
Anao dia ny mirary soa hatsarany. Tsy hahatonga anao ho faly, saingy ny volana maro, taona maro mihitsy aza, lany mandeha araka ny vehivavy ny ankamaroany dia mazava fa ny ara-pihetseham-po side ho anao dia kely na tsy misy mihitsy. Indray mandeha ianareo hahatakatra fa ny fifandraisana tsy tapaka ianao, dia tokony hanao fifanarahana mba tsy ho faly ianao, toy ny vehivavy atao. Fotsiny ianao mba tadidio izay. Afaka manao izany ianareo, dia tsy hamela ny fihetseham-po ho azy avy ao aoriana, na dia raha tena te-inona no te-ho azy, miaraka amin'ny fanakatonana tianao. Noho izany dia tsy hanadino ny mangataka antsika fa ny filalaovana fitia fiofanana. Ny fitia ny manam-pahaizana dia hanampy anao manala ny ny sy ny vehivavy hafa mba fantatrao inona ianao no tena liana amin'ny.
Faly izahay mba hanampy.
amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy izay mba nahalala olon-dehibe mampiaraka toerana mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy online chat roulette fisoratana anarana mba hitsena anao mba hitsena ny tovovavy hihaona ho an'ny firaisana ara-nofo video internet mpivady